द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | अप्रिल 18, 2020 | लिखित र मौखिक संचार कौशल
यस समयमा, सामान्य भन्दा बढी, तपाइँ सबै प्रकारका पठाउन र प्राप्त गर्न आफ्नो समय खर्च गर्दै हुनुहुन्छ इमेल। तपाइँ प्राय: "भवदीय," "उत्तम अभिवादन" वा अन्य "उत्तम अभिवादन" को साथ आफ्ना सन्देशहरू समाप्त गर्नुहुन्छ। तपाईंले आवश्यक योजना बनाएको छैन घ 'ईमेल लेख्नुहोस् तपाईको हाकिमलाई। तर चाहे तपाईका सहकर्मीहरूसँग वा तपाईंको सुपरवाइजरको साथ। तपाईं अनुकूलन गर्न र तपाईं ईमेलको अन्त्यमा प्रयोग गर्नुहुने विनम्र सूत्रहरूमा थोरै नवीनता थप्न चाहनुहुन्छ। सन्देश समाप्त गर्न साधारण वाक्यांश बाहिर एकको छनौट गर्नाले बल थपिन्छ। तर पक्कै पनि अनुपयुक्त शब्द वा एसएमएस प्रकारको संक्षेपको उपयोगले सडक यात्रामा निम्त्याउँदछ। तपाई कसैलाई मात्र लेख्न सक्नुहुन्न। विशेष गरी पेशेवर संसारमा।
ईमेल को अन्तमा समावेश गर्न नम्र सूत्रका 42२ उदाहरणहरू।
यहाँ 42२ उदाहरणहरू छन् विनम्र सुत्रहरू तपाईले आफ्नो ईमेलहरू शैलीमा समाप्त गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो मतलब मेल हो चिठी होईन। यदि तपाईं ईमेल मार्फत पत्र पठाउने निर्णय गर्नुहुन्छ भने। स्पष्ट रूपमा तपाईंको सन्देशको मुख्य भागमा कागजात, सीभी वा कभर पत्रको उपस्थितिको उदाहरणका लागि संकेत गर्नुहोस्। कागजातको जुनसुकै स्कोप जुन तपाईं संलग्नकको रूपमा समावेश गर्नुभयो। यदि यो चिठी हो, यो क्लासिक शिष्ट वाक्यांशको साथ समाप्त हुनेछ।
मेरो अभिवादनको साथ,
मेरो धन्यवादको साथ,
तपाईलाई महान दिनको शुभकामना
सबै सम्मान संग,
मेरा सबै साथीहरू,
मेरो साँचो अभिवादन प्राप्त गर्नुहोस्
तपाईको दिन राम्रो होस्,
हप्ताको लागि राम्रो सुरुवात,
शुभ सप्ताहन्तमा जानुहोस्,
मेरो सबै एकताका साथ,
मेरो सबै समर्थन संग,
मेरो सबै सहानुभूति संग,
मेरो प्रोत्साहनको साथ,
मेरो बधाई संग,
तपाईंको फिर्ती पेन्डि,,
सहयोगको लागि हेर्दै,
तपाईको बाँकी रहेकोमा,
तपाईंलाई उपयोगी रूपमा सूचित गर्न चाहानुहुन्छ,
तपाईंलाई मद्दतको आशामा,
मेरो सबै विचारको साथ,
तपाईंको जवाफ पेन्डि,,
तपाईंको ध्यान को लागी धन्यवाद,
रिड राम्रो लेखन, एक आवश्यक कौशल!
क्लासिक शिष्टाचार सूत्रहरू तपाईंको सबै मेलमा समावेश गर्न
कृपया, महोदय, महोदय, मेरो गहिरो आदरको अभिव्यक्ति स्वीकार्नुहोस्।
कृपया, स्वीकार गर्नुहोस् महोदया, सर, मेरो सम्मान भावनाहरु का अभिव्यक्ति।
कृपया विश्वास गर्नुहोस्, प्रिय महोदय, मेरो सौहार्दपूर्ण र सम्मानजनक भावनाहरूमा।
कृपया, स्वीकार्य महोदया, सर, मेरो आदर अभिवादन।
कृपया, सर, मेरो गहिरो आदर को अभिव्यक्ति स्वीकार गर्नुहोस्।
कृपया, सर, मेरो गहिरो सम्मान को आश्वासन स्वीकार गर्नुहोस्।
महोदय, मेरो आदरनीय अभिवादन।
महोदय, मेरो साँचो अभिवादन।
कृपया, स्वीकार गर्नुहोस् महोदया, सर, मेरा सबै भन्दा शुभेच्छा।
कृपया, महोदया, सर, मेरो उच्च विचार को आश्वासन स्वीकार गर्नुहोस्।
प्राप्त गर्नुहोस्, महोदया, सर, मेरो सादर।
कृपया, स्वीकार गर्नुहोस् महोदया, सर, हाम्रा सम्मान र समर्पित भावनाहरूको अभिव्यक्ति।
कृपया स्वीकार गर्नुहोस्, महोदय, महोदय, हाम्रो सबैभन्दा समर्पित भावनाहरूको अभिव्यक्ति।
मेरो आदरपूर्ण श्रद्धांजलिहरूको साथ, कृपया, स्वीकार्य महोदया, सर, मेरो सबैभन्दा प्रतिष्ठित विचारको अभिव्यक्ति।
तपाईंको सम्झौताको पेन्डि,, कृपया स्वीकार गर्नुहोस्, महोदया, सर, मेरो शुभकामना।
यदि तपाईं यस परियोजनामा ​​रुचि राख्नुहुन्छ भने, हामी भेटौं। कृपया, स्वीकार्य महोदया, सर, मेरो आदर अभिवादन।
तपाईंको प्रतिक्रियाको लागि पेन्डि,, कृपया स्वीकार गर्नुहोस्, महोदय, सर, मेरो साँचो अभिवादन।
तपाईबाट उत्तरको लागि पेन्डि,, म तपाईलाई सोध्छु, महोदया, सर मेरो दयालु अभिवादन प्राप्त गर्नका लागि दयालु हुन।
यस परिप्रेक्षमा, म कृतज्ञ छु, महोदया, मेरो सम्मान बधाई स्वीकार गर्न।
उत्तर अनुकूल छ जुन मलाई अनुकूल लाग्छ, म तपाईं लाई सोध्न चाहन्छु, महोदया, सर, मेरो शुभकामना।
रिड सरलताका साथ लेखेर दक्षताका लागि लक्ष्य राख्नुहोस्!
तपाईका इ-मेलहरूका लागि उत्तम विनम्र सूत्रहरू जुलाई 25th, 2021Tranquillus
अघिल्लोगतिविधि रिपोर्ट, तपाईंको उपकरणको प्रचार गर्नको लागि आवश्यक उपकरण।
निम्नतपाईंको मेलबक्सलाई संगीत बाकसको रूपमा सेट गर्नुहोस्